Omunye amavolovolo kunazo owaziwa futhi anamandla enziwa isibhamu RF kuyinto Serdyukova (ATP "Gyurza", "Vector"). Namuhla sizobe sesibheka umlando kanye nokuthuthukiswa kwaleli imodeli. Funda ukuthi yini kuphawuleka, ahlaziye main izici, kunezinzuzo zako kanye nebubi.
Umlando isibhamu self-yokulayisha Serdyukov (PCA) waqala ukuthuthukisa isibhamu isakhiwo esisha e Klimovsk Research Institute. I isibhamu kwadingeka ukushaya nozakwabo kokubili ezifuywayo angaphandle inkonzo nezinketho tekusebenta futhi ukulwa. Isidingo ukudala entsha, ngokuphelele ihlukile kuleyo esetshenziswa ibutho, abophiko lwezokuphepha kanye abomthetho, umfuziselo handgun siqu kuhlehlela emuva 80s. Isizathu sisobala - isingeniso ku amabutho emazweni amaningana PPE amakilasi angafani. Umzimba nasezembathweni isigaba sesibili, isibonelo, ungayeka inhlamvu isibhamu TT lapho kokudubula at uhla close.
Kodwa uwumnikazi wenkampani inhlamvu-ubufakazi ayematasa isetshenziswe kuphela abomthetho, kodwa futhi izinhlangano amaphekula. zempi umzimba sivikela esiphezulu 30% emzimbeni. Kodwa kule contact umlilo Konke kuqala futhi ugijimela kudlula ngokushesha kakhulu. Ngakho-ke, isikhathi akwanele aim futhi umlilo ivuliwe kunjalo, njengoba kuba ilitshe elikhulu. Nge izivikelo zomzimba Kulezo zimo, awukwazi kuphela ukusinda, kodwa futhi ukuba sokuhola umlilo impendulo.
Sasidinga isethi entsha izikhali, igobolondo, okuyinto, ne Ubukhulu efanelekayo, isisindo ongaphakeme esebuya ababuthakathaka, ngabe ngempumelelo abhubhise isitha ogqoke ijazi flak.
Ukusetshenziswa kabanzi izembatho zokuzivikela kwakungesona ukuphela kwesizathu kuphela ukwakhiwa kwezikhali ezintsha. uhlelo izikhali Soviet wawusekelwe emikhulu ngxabano imiqondo amasosha NATO. Ngakho, ukugxila rocket namabutho ithangi, izindiza, wezikhali kanye embonini yezezimoto elihamba ezinkulu. izikhali Siqu ukudlala omunye izindima zokugcina. Ngokwesibonelo, PM (isibhamu Makarov) sidalwe njengoba isikhali ukuthula. Futhi izikhulu lokulwa namanje wathatha umshini. Kodwa izimpi engabandlululi futhi lendawo 70-80s lendlela izingalo kwakungalungile ukuphimisa ngokuphelele.
Okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi nezibhamu yangasese linendima ebalulekile. Ukungqubuzana iphutha ezimpini okungenhla, njengoba umthetho, iqhaza elihamba amayunithi amancane, eyayibonakala kusekelwa wezikhali, izindiza kanye amathangi. Isetshenziswa ngokuyinhloko impi yabashokobezi edonse, nge eziningi ukuhlaselwa okungazelelwe kusukela abaqamekeli nokushutha nge amabanga amancane. Ngenxa yalokho, kwaba khona isidingo nesimanje handgun siqu.
Ekupheleni kuka-80 nezingalo umkhakha ithole izinto ezintsha. Kuwo wonke isibhamu izinguquko design ziye kwethulwa. isizukulwane esisha isibhamu kwakumelwe bahlangabezane nalezi zidingo ezilandelayo: ukulungela njalo, ukuphepha, handling, ukuthembeka ezimweni isicelo elibuhlungu, firepower kakhulu, lula futhi kalula ukusebenzisa nokugcina. Awu esetshenziswa igobolondo wawuzoba okusezingeni eliphezulu isinyathelo penetrative kanye izinhlamvu kokuma.
Ngo-1991, iqembu Umklamo Petrom Serdyukovym walibangisa wadala ezimbili prototypes we isibhamu isampula ne Inkomba 6P35. Phakathi naleso sikhathi, B. Yuryev eseqedile ukuthuthukiswa a igobolondo entsha RG052 okusezingeni eliphezulu isinyathelo penetrative kanye izinhlamvu kokuma. Igobolondo waba ubukhulu 9 mm ubude 21 mm. Lapho ukuthuthukiswa igobolondo ukuthi kucatshangwa ukuthi kuzosebenza hhayi kuphela isibhamu, kodwa futhi sub-izibhamu. Isici esiyinhloko kulokho igobolondo ungaphakathi isakhiwo zezibhamu. Ingxenye engenhla amaphrojekthi core kusuka kumasistimu asebenzayo, futhi izindlela at Ukungena yayo kudinga amandla kancane.
Pistol Serdyukova kwadingeka kokuqala isivinini shot 420 m / s. Kwanele ukuthi inhlamvu owahlaba zempi umzimba, eyenzelwe ukunqanda amachashazi nokuhlanganisa isibhamu. inguqulo ethuthukisiwe isibhamu yadalwa ngo-1993, lapho wathola RG055 Inkomba futhi isihloko ukusebenza "isibhamu Serdyukov" Vector "." Le modeli lihlukile sangaphambilini ngefomu kanye nomklamo kwebhowudu, umgqomo odongeni ukujiya kanye ukuma emehlweni, okuyinto lithole ukufakwa koqweqwe lwawo. "Vector" kwavunyelwana ngoba amayunithi amandla amabutho aseSoviet. Kamuva ngabo kwafika isibhamu ukuthekelisa Serdyukov SPS - "Gurza". Le modeli isasetshenziswa wamabutho sangaphakathi emazweni amaningana. onobuhle Foreign ungayeki inhlanganisela enjalo ngempumelelo izici, ezifana isibhamu Serdyukov. "Gurza" kanye "Vector" akulona igama elisemthethweni sikhali futhi akubonakali kule imibhalo.
Ngo-1996, imodeli ethuthukisiwe wangenela inkonzo FSB amayunithi, ngokuthi "isibhamu Serdyukov SR-1." Umklamo kwadingeka izinguquko ezimbalwa. Ngenxa kulungiswe isibambo (namantombazane okwengeziwe phambili ezinhlangothini ezingemuva futhi ribbing ezinhlangothini), sesiye kuwusizo kakhudlwana, okuyinto ebaluleke, unikezwa ukufinyela kuqhathaniswa enamandla. Ubukhulu we isibhamu kancane yanda, futhi nabo yanda, futhi imininingwane nsiza. wazalela-chrome steel ekwenziweni. Okuthuthukisiwe futhi kwaba nomvikeli. Bekanye igobolondo 6,74 igremu isibhamu wanika 410 m / umzuzwana nomlomo velocity 565 Joules zamandla. yesibili grade izivikelo zomzimba angase wamshaya bekude amamitha angu-70. Eziningana cartridges entsha nge Lubanzi, nazo wadala udibi Ukubhoboza Tracer ichashazi, inhlamvu letinalokubalulekile phambili.
Pistol Serdyukova CP-1 isiteshi wathola uhlelo emgqonyeni ukukhiya nge okuthiwa izibungu zixegezele. Lokhu kunomthelela omuhle ukunemba. Thombo ukubuya elise emhlabeni stem kuhlala esesimweni ukugcizelelwa ngokukhethekile. Ukuze kube lula kwazo uzimele inezingxenye ezimbili. Yiphathe inhlamvu unogada eyenziwe ngepulasitiki emelanayo uthuthumele. Metal (engenhla) ingxenye kuhlanganisa ngetincenye futhi umhlahlandlela ibhawudo. Mshini inhlamvu double action ukuphepha Leli qembu ukudla, kodwa ngokuzenzakalela ke ungacimi.
Ukuze wenze imodi shot DA, kuzomele uqale ukubeka umkaki phezu kwesigamu-iqhude. Ukuze likhala le ubakaki ngesandla, udinga ngempela uvala othomathikhi fuse isango. Uma ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko sokudubula senzeka misfire, ke aqede chambering we igobolondo entsha ekamelweni, kunokuba kabusha okuphiniwe capsule, njengoba ngaphambilini.
Kuthunyelwa amandla kagesi engeziwe kudinga ukunakekelwa okukhethekile. Ngakho-ke, kukhona ezimbili othomathikhi isibhamu Fuse. Isibambo, kuba isigwedlo, fuse itholakala ohlangothini ezingemuva isibambo, uvala sear. Eyesibili amaphrojekthi fuse ebusweni yesivalo nemabhuloki ukuhamba kwayo kuze Uzalo icindezelwa nokudubula.
Lapho bonke cartridges zomagazini kwandziswa ikhava yesivalo kuba ngokuzenzakalela ukumisa yokucina (ungalibali futhi ayeke). Lapho esitolo entsha uthatha indawo, ikhava yesivalo ngokuzenzakalelayo asuswe stop; ziyakuhlushwa round wathumela ekamelweni. Ngakho, ngo-axube imishini esitolo, umdubuli ungakwazi ngokushesha umlilo ngaphandle kabusha isibhamu. Ukubambezeleka umshudo emuva (okudinga isikhathi esiyigugu) njengoba ku amavolovolo kakhulu, asikho isidingo.
izici ezimbalwa nje
Pistol Serdyukov has a ezimbili ngendlela beya magazini isiqhebezo. Itholakala endaweni ejwayelekile - phezulu esitolo, ekwehleleni. Ngenxa yokuthi isiqhebezo itholakala nhlangothi zombili, isibhamu kanye lula efanayo ingasetshenziswa kokubili sokudla futhi eyinxele. Isitolo has a isakhiwo ibhokisi-like futhi angazamukela ezingaba ngu-18 imizuliswano. Lesi sici kanye self-ukulayisha isibhamu kuyinto inzuzo yayo esemqoka. Ngemishini sokudubula inikezwa yi nokuzwa front futhi bakhulise, okuyinto zipendwe strip eliqhakazile umlilo olunembile lapho kuhlwa. Uma kudingeka, emehlweni ezingemuva kungase kushintshwe ngosizo amathuluzi akhethekile kufakwe iqoqo izingxenye ezisele. izibhamu disassembly eyalo inqubo ejwayelekile.
Izinguquko ku 1997-2003,
Ngo-1997, waphathwa isibhamu Serdyukov design izinguquko futhi. Isibambo ithole indlela entsha eye wamvumela lula ngokulinganayo ukubamba isibhamu abacibishelayo ka Imizimba ezahlukene. Thenga lithole push-inkinobho isiqhebezo. A amadivayisi sextant umzuzile usayizi ukuhluka shape. Ekupheleni konyaka elifanayo isibhamu wayengakwazi uwine "Rook" umncintiswano futhi basungula eyabo. Umsebenzi ku idizayini yekugcina ye-imodeli izidingo ezintsha ngokuthi "Granit" kwaze 2000. Ngenxa yalokho, lo isibhamu waphinda washintsha igama layo ku "Vector SR-1M" futhi babhaliswa kwezinye amayunithi amasevisi ekhethekile ukuhlola.
Ngo-2003, Serdyukov isibhamu wamukelwa FSB, kodwa emva ukuguqulwa esilandelayo. Ngaba isango ngokunethezeka, kukhuphuke inhlamvu unogada. Manje imodeli seyaziwa ngokuthi ATP, okusho "self-ukulayisha isibhamu Serdyukov." Nokho, yayingathandi self-ukulayisha ngaphambili. Ngokuvamile, lokhu imodeli ibizwa ngokuthi impi ngezindlela ezahlukene: "isibhamu Serdyukov", "ATP", "SR-1", "Vector", "Gurza", naphezu kweqiniso lokuthi ngamunye amagama inikezwe izikhali eminyakeni ezahlukene.
Ehlobo lika-2012 waklonyeliswa kwenye ukuguqulwa PCA. It kwahluka khona Picatinny anemifantu (esetshenziselwa ukulungisa sezibani Tactical kalimatornyh izinto laser izikhombo). Ukuze imodeli 2012 kungenziwa agibele amahhashi okokunciphisa umsindo. Le nguqulo isetshenziswa amasosha ahlomile ehamba kuze kube yilolu suku.
Ngokuvamile, self-ukulayisha isibhamu Serdyukova has ukusebenza kakhulu kanye nokusebenza bukhoma. Ukwethembeka kwako kuqinisekiswa kubahlanganyeli langempela ukulwa imisebenzi. Imodeli usebenza kahle kule uhla lokushisa kusuka -50 kuya +50 ° C. Ngesikhathi esifanayo sibonga plastic yayo isibambo ingenziwa kahle ngesandla sakhe angenalutho zonke izimo zezulu. Ukhiye inhlamvu unogada akuvimbeli sokudubula ukhululekile. Serdyukova isibhamu emhlanganweni has a high, ukucutshungulwa izinto futhi enza yabo. High-amandla plastic ezisetshenziselwa ukwakha sazibonakalisa mkhulu.
Isibambo fuse isiphethu onamandla ngempela ukuphokophela isandla. Ngenxa enkulu ukusingatha labo ibhulashi ezincane, lapho beshintsha esitolo une ukushintsha isango. umumo Strange kwenza kube nzima ukuqala esheshayo shot DA imodi lapho dostavaniya izikhali. Iqiniso lokuthi, njengoba umthetho, pointer umunwe uhlezi phezu onqenqemeni yabalindi inhlamvu, hhayi isikhungo yayo, okuholela slippage ngomunwe.
Naphezu kwalezi zimo ezinhle amaphutha, isibhamu self-yokulayisha Serdyukov ngenkuthalo Lenza futhi lasebenzisa izinhlelo kokusetshenziswa nokuvikeleka bomthetho ezihlukahlukene WaseRussia. He is enkonzweni nge-FSB amayunithi, FSO, amayunithi ehlukile futhi SWAT umsebenzi amabutho ezikhethekile. Izikhali nazo ziyatholakala ehhovisi likamongameli elibhekele Guard kanye Amasosha Border.
Pistol Serdyukov: ezibekiweko lobuchwepheshe
Prakthiza luveza ukuthi ububanzi sextant yalolu hlobo isikhali elingamamitha 100. Ukunemba impi uyakufanelekela ukudunyiswa. SMG maphakathi-ukulungiselela kubeka amachashazi eziyishumi at ibanga 25 amamitha ukuba ububanzi 6.5 cm. At amamitha 100 ibanga Inkomba luyanda 32 cm.
Shot igobolondo nge engamakhulu amamitha SP-10 punches vest ehlanganisa titanium amapuleti amabili 1.4 mm ukujiya kanye 30 zamatshe Kevlar.
Njengoba isifinyezo sezinto izici eziyinhloko PCA ukhumbule isibhamu. Gun Ubude 200 mm ubude emgqonyeni - 120 mm. izingalo ukuphakama - 145 mm, nobubanzi - 34 mm. Calibre - 9 isibhamu 21. isisindo Empty - 900 g Isitolo yokuhlala cartridges 18.
ATP - isikhali okumele siziqhenye ngayo. Hhayi lutho ngoba isivele isetshenzisiwe iminyaka eminingi ngempoqo amayunithi emhlabeni wonke. Ezinye izinto ukuba alingane izici isibhamu ngokucacile njengoba kuphakeme kakhulu izimbangi angaphandle ngu isibhakela ikhono, ngokudubula ukunemba kanye kalula yokusetshenziswa. Yiqiniso, i-PCA unobuthakathaka, kodwa abawona enkulu ngokwanele ukubhala off.